Gabadhii 'ugu cuslayd adduunka' dawayn dheeri ah ayay u baahan tahay - BBC News Somali
Gabadhii 'ugu cuslayd adduunka' dawayn dheeri ah ayay u baahan tahay
Image caption Dhakhaatiirtu waxay sheegeen in Eman Abd El Aty ay ka go'ay in kabadan 250kg oo cayil ah
Haweenay reer Masar ah oo la rumaysnaa in ay ahayd qofkii ugu miisaan badnaa adduunka ayaa hadda xaalado caafimaad oo kala duwan lagaga daweeyay isbitaal ku yaalla Abu Dhabi.
Eman Abd El Aty, ayaa la sheegay in culayskeedu uu haa 500kg, isbitaal ku yaalla Hindiya ayay ka soo tagtay Khamiistii ka dib markii ay dhakhaatiirtu sheegeen in ay ka go'day 250kg.
Laakiin dakhaatiirta Isutagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in ay hadda la tacaalayaan wadne xannuun iyo qaybo jirkeeda ka mid ah oo u boogoobay jiifkii badnaa awgeed, xaaladahaas oo dheeri ku ah cayilkii siyaadada ahaa ee jirkeeda saarnaa.
War qoraal ah oo uu soo saaray Isbitaalka Burjeel ee magaalada Abu Dhabi ayaa sheegay in 20 dakhtar ay dawaynayaan Eman.
Muran hareeyay qaliinkeedii Hindiya
Joogitaankeedii maalmihii u dambeey ee dalka Hindiya oo lagu qalay ayaa waxaa hareeyay muuqaal ay walaasheed Shaimaa Selim soo dhigtay baraha bulshada oo ay ku sheegtay in walaasheed aysan wali awoodin in ay hadasho ama dhaqdhaqaaqdo isla markaasna uusan ka dhicin hilib badan sida ay sheegeen dakhaatiirtu.
Isbitaalka ayaa si wayn u diiday eedayntaas.
Qalliin cayil dhimis ah oo lagu sameeyay haweenay 500kg ah
'Carruurta Tanzania oo ugu caafimaad badan adduunka oo dhan'
Mataano 97 sano jira oo qabow ugu dhintay Maraykanka
Dr Muffi Lakdawala ayaa telefishin Hindiya laga leeyahay u sheegay in Selim ay doonaysay in walaasheed ay isbitaalka joogto tan iyo inta ay ka soconayso, balse dhakhtar ku takhasusay lafaha iyo murqaha uu u sheegay in walaasheed Abd El Aty aysan mardambe cagaheeda ku socon doonin.
Wuxuu sheegay in arrintaas ay Selim ku qaaday in ay eedayso isbitaalka oo ay go'aansato in ay walaasheed u wareejiso Abu Dubay.
"Waan ka xumaaday in Eman ay ka baxdo baxnaanintayda la iina sheego in aanan sii wadi karin dawayntii aan wajigeeda ku samayn lahaa siddii qorshuhu ahaa, si kastabase ha ahaatee waxaan ku rajo waynahay in ay iyadu nafteeda xannaanayn doonto markastana si niyad sami leh ayaan ugu rajaynaynaa wanaag" ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Qaliinka looyaqanno Bariatric surgery ee dadka cayilka lagaga yareeyo ayaa la maciinbidaa marka ugu dambaysa ee dadku ay halis u galaan cayilka iyo baruurta xad dhaafka ah.
Lahaanshaha sawirka SAIFEE HOSPITAL
QM: Waxaan kaalmo caafimaad garsiinay Puntland
11 Maarso 2017
Muuqaal Xisaabiye isu badsashay kalkaaliso caafimaad oo ku nool Xalab
6 Febraayo 2017
Maqal Soomaaliya oo beenisay in xoolaheeda ay cudur qabaan
Maqal Dr Gaboose: 'Goob caafimaad oo kaliya lagu kala wareejin karaa kelyaha iyo xubnaha kale ee bini'aadamka'
10 Abriil 2017